Iindaba ezi-4 zokuhlelwa kwabantwana kunye nefilimu ngoDisemba | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | I fantasy, Iincwadi, Iincwadi zoLutsha, Ezahlukeneyo
Ngoku singene ngomhlaka. Omnye unyaka uza kuphela (kwaye ngamana kunokubakho ezininzi). Zininzi iincwadi ezipapashiweyo, ezilungileyo, ezimbi neziqhelekileyo, njengesiqhelo, kodwa zimbalwa ezisandula ukuphuma okanye zikhutshwe kule nyanga iphelileyo yonyaka. Namhlanje Ndizisa ezi-4 kubafundi abancinci kunye neecinephiles. Ngokuqinisekileyo banokubathanda. Ukuvala.
1 I-Nur kunye ne-Olentzero-iToti Martínez de Lezea
2 Esona sipho sibalaseleyo seKrisimesi-uNoa Herrera Martínez
3 Iplanethi yee-Apes. Incwadi yesiKhumbuzo sama-50-Ababhali abahlukeneyo
4 Njengokuba Unqwenela: Amabali angenakucingelwa ngokwenziwa koMtshakazi-uCary Elwes
Nur kunye neOlentzero -Toti Martínez de Lezea
Siyamazi uToti Martínez de Lezea (Vitoria-Gasteiz, 1949) ngokuba ngu-a Umbhali omkhulu wenoveli yezembali, kodwa ikwanayo le uthotho lweencwadi zabantwana ogama ophambili nguNur. Yiya enye ishumi elinambini yezihloko kwaye ngoku yinto yakho entsha enokonwabela le mihla izayo. Kuboniswa nguIván Landa.
Ithetha ngantoni? Kulungile UNur ubhalele iOlentzero ileta apho acela isithuthuthu sesilivere, kodwa kusekho okuninzi okuseleyo kwaye usuku lude. Ke, ngelixa belindile, iAitite kunye neNur zisete umthi weKrisimesi. Emva koko uNur uya kudibana nabazala bakhe uLucia noSara kunye nabahlobo babo kwaye ngamnye kubo ucele isipho ku-Olentzero. Xa uNur esiza ukongeza ufuna ukukubuza ukuba uhlala phi kwaye ukuba ungaya kuye.
Elona xesha lihle leKrisimesi -Noa Herrera Martínez
Kwaye ukuba sikunye namabali abantwana, singasizisa njani esi sincinci Umbhali oneminyaka elishumi ubudala kunye nomzobi waseSeville Yintoni ebizwa ngokuba nguNoa Herrera Martínez? Umhleli Babidi-bu, Ezikhethekileyo kuncwadi lwabantwana nolutsha, zisizisela oku Ibali lentombazana eyayifuna into enye ngaphezu kwayo nayiphi na into ehlabathini. Ke, nangona ngamanye amaxesha kunzima ukuba iminqweno yethu izalisekiswe, akufuneki siphelelwe lithemba. Yonke into inokutshintsha, njengoko itshintshile, nangona uncedo oluncinci oluvela kumntu okhetheke kakhulu.
UNoa herrera Kabini uphumelele ukhuphiswano loncwadi kwi-Cadena Ser kwaye kuba omnye umnqweno wakhe omkhulu zoba, ngoku ivula ngeli bali. Umzekelo wabafundi abaninzi abancinci njengaye.
Iplanethi yee-Apes. Incwadi yesiKhumbuzo sama-50 - Ababhali abohlukeneyo
Le ncwadi ngoku iyaphuma ibhiyozela i- Isikhumbuzo seminyaka engama-50 yale klasikhi yefilimu. Kwaye ababhali abadumileyo ngabo Sondela uze uthethe ngemiba eyahlukeneyo yefilimu, Eziza kuyonwabisa kakhulu iicinephiles.
Zijongene ikakhulu: ukufota, abalinganiswa abaphambili, ubuhle, iimpembelelo, ukugxeka ezopolitiko, ukulandelelana kunye uyabuyisa ezenze trilogy yokugqibela ... Kwaye zonke zikhatshwa yi Umboniso obalaseleyo weefoto kunye neepowusta Kwimovie.
Ababhali ba URamón Alfonso, umgxeki wefilimu kunye nembali yezembali, ekhethekileyo kwiintsomi UJaime Iglesias, omnye umgxeki odumileyo woluhlobo; Y UAdrian Sanchez, elinye igunya kulo mbandela.
Njengokuba Unqwenela: Amabali angenakucingelwa kuFilimu lweNkosazana enguMtshakazi -Cary Elwes
Ngubani ongabonanga Inkosazana ebandakanyekileyo? Ngubani ongazange athi malunga «Molo, igama lam ndinguIñigo Montoya. Ubulele utata wam… Ulungiselele ukufa! »? Ewe, le ncwadi sele iphume kunye nememori esayinwe ngumntu ophambili, umdlali weNgesi uCary Elwes, owanika ubomi Westley. Kuyo usixelela yonke into kulungelelwaniso ngo-1987 kwiscreen esikhulu sebali ngoku eliqhelekileyo elisekwe kwi UWilliam Goldman inoveli.
Inkosazana ebandakanyekileyo iyaqhubeka ukumangalisa enkosi ngokudityaniswa kwayo ngokugqibeleleyo nefantasy, uburharha kunye nobukrelekrele. I-Elwes iqokelela ii-anecdotes Kudlala amanye amalungu ayo, njenge URobin Wright, uMandy Patinkin (Íñigo Montoya), uAndré omkhulu, uBilly Crystal okanye uWallace Shawn.
Con intshayelelo nguRob Reiner, Umlawuli wefilimu, le ncwadi iyakonwabelwa ngabo bonke abayenze ngale klasikhi. Ushicilelo ikwaquka ipowusta Kwimovie.
Okokugqibela, masikukhumbule oko UCary Elwes ubuyile ekukhanyeni kulo nyaka ngenxa yendima yakhe Olunye uthotho olunempumelelo enkulu kunye neengcamango zengcamango / zesayensi, ezihlonipha ezo zi-80s ekucingeni kwayo: Izinto ezingaqhelekanga.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Iindaba ezi-4 zokuhlelwa kwabantwana kunye nefilimu ngoDisemba